Nagarik News - जंगल बोई
'द जंगल बुक' कथानक र कम्प्युटर प्रविधिको उच्चतम प्रयोगका कारण निकै चर्चामा आयो। केही सातादेखि जंगल बुकले मात्र चर्चा कमाएको छैन। चर्चा कमाएको अर्को विषय हो जंगल बोई। जंगल बोई अर्थात जंगल बुकको मूल पात्र नील सेठी। जंगल बुकसँगै नील राता रात स्टार भए। मोग्ली बनेर अभिनय गरेका नील सेठी बाह्र वर्षका भए। जंगल बुकको लोभलाग्दो अभिनयले उनी अहिले सबैको नजरमा परेका छन्। उनको अभिनय कलालाई समीक्षकहरुले पनि राम्रैसँग प्रशंसा गरिरहेका छन्।
फिल्ममा नील जंगली अवस्थामा हुर्किएको एक बेबारिसे बालकको रुपमा देखिएका छन्। एउटा बालक र जंगली जनावरसँगको उसको सम्बन्धलाई फिल्ममा उतारिएको छ। फिल्ममा उनी जंगली ब्वाँसाहरुको झुन्डमा हुर्कन्छन्। शेर खान नामको बाघको आतंकपछि मानव डमरु मोग्ली ब्वाँसाहरुसँग छुट्टिए पछिको जंगली रोमाञ्चलाई फिल्ममा सजीव रुपमा देखाइएको छ। त्यो बाहेक फिल्ममा बाघ, चितुवा, सर्प र बाँदर लगायतका पात्रहरु प्रशस्त छन्। ती जनावरसँग उसले तीता मीठा घटनाहरु संगाल्न पुग्छ।
फिल्ममा नील एकमात्र मानव पात्र हुन्। नीलका प्राय दृश्यहरु ब्लु स्त्रि्कन अगाडी खिचिएको थियो। ब्लु स्त्रि्कनले स्टुडियोमा खिचिएको दृश्यलाई अन्य फुटेज वा फिल्मका छुट्टा छुट्टै दृश्यलाई एकै ठाउँमा समेटेर प्रस्तुत गर्न सहयोग गर्छ। उनले फिल्मका लागि पुतली र डमी सामाग्रीसँग अभिनय गरेका थिए। पछि फिल्मलाई जीवन्त दिन ती पुतली र डमी सामाग्रीलाई कम्प्युटरमार्फत जनावर पात्र र जंगलका दृश्यका रुपमा रुपान्तरण गरिएको थियो।
नीलले बलू नामको भालुपात्रसँगको दृश्य सुटिङका समयमा खुबै रमाएछन्। उक्त दृश्यमा नील गीत गाउँदै बलूको पेटमा तैरंदै नदी पार गर्छन्। त्यो दृश्य खासमा सानो पानी कुन्डमा खिचिएको थियो। नील भन्छन्, 'त्यहाँ ठूलो प्लास्टिकसँगै माथिपट्टि खैरो कार्पेट राखिएको थियो। पानीमा भिजेको कार्पेट पछि बलूमा परिणत गरियो।'
चार वर्षको उमेरमा तेक्वान्दो सिकेका नीलले फिल्ममा प्राय स्टन्टहरु आफैले गरेका हुन्। फिल्मकै लागि उनले एथ्लेटिक क्रियाकलाप गरे। उनी भन्छन्, 'म कहिले कुदेथेँ, कहिले उफ्रन्थें। आफूलाई मनलाग्दी गर्थें। यसो गर्दा मोग्ली बन्न मलाई गाह्रो भएन।' भारतीय मूलका नील न्यूयोर्क सिटीमा हुर्केका हुन्। न्यूयोर्क सिटी र फिल्ममा देखाइएको जंगलमा आकाश पाताल फरक छ। यती हुँदा हुँदै पनि आफू र मोग्लीसँग धेरै मिल्दा कुरा भएको नील बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'मोग्ली र म उस्तै उस्तै छौं। त्यसैले पात्रमा केही परिवर्तन छैन। हामी दुवैजना हठी, रोमाञ्चकारी र उर्जावान छौं।'
जंगल बुकका लागि नील कसरी छानिए भनेर धेरैलाई जिज्ञासा लाग्दो हो। नील अमेरिका, न्यूजिल्यान्ड, क्यानडा लगायतका देशका दुई हजार बालबालिकाहरुबाट छानिएका थिए। भेराइटीसँगको कुराकानीमा निर्देशक जोन फ्याब्रिउले फिल्मका लागि उपयुक्त कलाकार छान्नु निकै चुनौतिपूर्ण रहेको बताएका छन्। फ्याब्रिउले भनेका छन्, 'नील निकै प्रतिभाशाली छ। नीलको भावभंगी र शारिरिक विशेषता सन् १९६७ को जंगल बुकको मोग्ली एनिमेसनसँग मिल्दो थियो। त्यसैले उसलाई छान्यौं।' रमाइलो कुरा त के छ भने नीलले फिल्म खेल्नुअघि 'द जंगल बुक' किताब पढेका थिएनन्। अडिसन पछि मात्र उनले एकप्रति किने र पहिलो पटक पढे। १९६७ को एनिमेसन उनले अडिसन अघिमात्र हेरेका थए रे। फ्याब्रिउ अडिसनका समयका उनको अभिनयबाट प्रभावित भएका थिए। २०१४ मा जंगल बुकमा नील सेठी खेल्नेबारे खुलाइएको थियो।
जंगल बुक खेल्नु अघि नील 'दिवाली' नामको छोटो फिल्ममा देखिएका थिए। फिल्ममा नील बाहेक बेन किंस्ली, इद्रिस एल्बा, स्कार्लेट जोन्सन र बिल मुर्रे लगायतका हलिउड सेलेब्रिटिहरुले विभिन्न जनावरको आवाज दिएका छन्।
'जंगल बुक पछि के त?'
'म पछि गएर डेन्टिस्ट बन्ने सोच राखेको छु।', न्यूयोर्क डेलीसँगको केही महिना अघिको अन्तवार्तामा उनले भनेका थिए। उनी डेन्टिस्ट बन्नेबारे केहीले उनी कलिलै भएर यस्तो भनेको बताएका छन्। किनकी नीलका बुबा–आमा दुवैजना डेन्टिस्ट हुन्।
खबरलाई सही मान्ने हो भने उनी जंगल बुकको दोस्रो शृंखलामा पनि आउँदैछन्। हलिउड रिर्पोटरका अनुसार डिज्नेले यसको सिक्वेलबारे प्रक्रिया अगाडी बढाइरहेको छ। तर पनि आधिकारिक रुपमा बताइएको छैन्। नीललाई यसको सिक्वेलमा हेर्न आतुर उनका प्रशंसकहरु टि्वीटर र फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा भिडिरहेका छन्। नीललाई नै राख्न निर्देशकलाई दबाब दिइरहेका छन्। 'मलाई 'जंगल बुक २' गर्न मन लागेको छ', इन्डिपेन्डेन्टसँगको एक अन्तवार्तामा उनले भनेका छन्, 'मलाई थाहा छैन डिज्नेले के सोचेको छ। तर म मोग्लीको रुपमा खेलिरहनेछु र मलाई नयाँ सुपरहिरो फिल्म पनि खेल्न मन लागेको छ।' जंगल बुकको सिक्वेल आउला नआउला त्यो त हेर्न बाँकी नै छ।
« किन जीवनदेखि अघाइन् प्रत्यूषा? सोनाक्षीले दिइन् नेपालीलाई धन्यवाद »